Nchout Ajara Njoya - "ငါသည် CAN ရွှေ့ဆိုင်းခြင်းကိုပိုနှစ်သက်သည်။ " - TELES RELAY
Nchout Ajara Njoya - "ငါ CAN ရွှေ့ဆိုင်းမှုကိုပိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်"
By Tele RELAY တစ်ခု On ဇူလိုင်လ 15, 2020
ဂင်းနစ်စူပါလိဂ်: Day2အချိန်ဇယား! - …
လက်မောင်းနပန်း Fecafoot - လိဂ်: ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်အံ့အားသင့် ...
Covid-19 ကူးစက်ရောဂါကြောင့်မျှော်မှန်းထားသည်ထက်ကြာကြာဖြတ်တောက်မှုအပြီးတွင်နော်ဝေအမျိုးသမီးဘောလုံးပြိုင်ပွဲရာသီသစ်သည်ဇူလိုင်လအစောပိုင်းတွင်ပြန်လည်စတင်ခဲ့ပြီးနှစ်ရက်ကြာသည်။ Sandviken အသင်းအတွက် ၃-၂ ပွဲစဉ် ၁ အရှုံးအပြီးတွင် Nchout Ajara Njoya အသင်း၏ Valerenga သည် Roa 3-2 အသင်းအား ၂-၀ ဖြင့်အနိုင်ရခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူမ၏အသင်း၏ပထမဆုံးပွဲစဉ်တွင်ကစားခဲ့သည့်ကင်မရွန်းကယခုအကြိမ်သည်ပထမပိုင်းတွင်ဂိုးကိုဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်ပိုက်ကွန်ကိုပြသည်။ ပြီးခဲ့သည့်ရာသီကပရီးမီးယားလိဂ်၌သွင်းယူထားသောဂိုး ၁၁ ဂိုးထက်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်ခြင်း၏အဓိကရည်မှန်းချက်နှင့်အတူ။
တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအသက် ၂၇ နှစ်အရွယ်တိုက်စစ်မှူးဟာပြန်လာပြီး CT ကစားသမား၏ရည်မှန်းချက်သို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းခြင်းအပေါ် နိုင်သလား မှင်တွေအများကြီးထုတ်ပေးနေဆဲသောinတ္။
Covid-19 ကပ်ရောဂါအခြေအနေတွင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးသည်မည်သို့အောင်မြင်ခဲ့သနည်း ?
ကျနော်တို့ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့တွင်ဝေးရှုံးနိမ့်နှင့်အတူရာသီပြန်လည်နှင့်ငါတို့နေအိမ်အောင်ပွဲနှင့်အတူဇူလိုင်လ 10 ရက်နေ့တွင်ပြန်လည်ကောင်းမွန်။ ငါနောက်ဆုံးရာသီအဘို့အကြှနျုပျ၏ရည်မှန်းချက်ကောင်တာဖွင့်လှစ်။ လေ့ကျင့်ခြင်းမှရာသီသို့အစပြုခြင်းသည်အတားအဆီးအမူအရာများကိုလေးစားရန်အဟန့်အတားဖြစ်စေခဲ့သည်။ ပွဲစဉ်များအတွင်းသူတို့ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့မြင်နေရဆဲဖြစ်သည်။ ပန်းတိုင်အခမ်းအနားများပွေ့ဖက်ခြင်းမရှိဘဲဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာတော်တော်လေးလိုက်တယ်ဒါပေမယ့်သင်ကတဖြည်းဖြည်းနှင့်ရန်အသုံးပြုရ။ ဒီအခွင့်အရေးကိုယူပြီး Covid-19 ဟာတကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်ဖြစ်ကြောင်း၊ အစိုးရနှင့်အစိုးရမှချမှတ်ထားသောအတားအဆီးအမူအယာများကိုဆက်လက်လေ့လာသင့်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်များအားထပ်မံပြောကြားရန်ကျွန်ုပ်အခွင့်အရေးယူသည်။WHO က.
အမျိုးသမီးချန်ပီယံလိဂ်၏ဖန်တီးမှုကိုကြေညာနေစဉ် က CAF မကြာသေးမီကဖျက်သိမ်း နိုင်သလား အမျိုးသမီးများအတွက် ၂၀၂၀ ။ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအမျိုးသမီးဘောလုံးအတွက်အဟန့်အတားတစ်ခုလား။ ?
ဖျက်သိမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်ချက် နိုင်သလား အမျိုးသမီးက3ဖြစ်တယ်e ဖြစ်ပျက်မှုဇမ်ဘီယာကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးနောက်ကျွန်ုပ်အတွက်နှစ်တစ်နှစ်၏ဝမ်းနည်းဖွယ်သတင်း Covid-19 နှင့်နောက်ဆက်တွဲသောလူ့ဆုံးရှုံးမှု။ ကျွန်တော်တို့နောက်ကိုလိုက်နေတဲ့ဘောလုံးပရိသတ်တွေအတွက်အရမ်းဝမ်းနည်းမိပါတယ် နိုင်သလား ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်ဖို့ပဲ။ ငါဒီရှုထောင့်ကိုအလေးအနက်ထားအလေးထားပြောကြားသွားသည်။ Indomitable Lionesses ရွေးချယ်ခြင်းဟာနုပျိုလာပြီးဒီလူငယ် Lionesses တွေဟာအတွေ့အကြုံရရှိနိုင်တယ်။ အချို့အာဖရိကဘောလုံးသမားများအတွက်၊ နိုင်သလား ထို့အပြင်ထွန်းလင်းရန်နောက်ဆုံးအခွင့်အလမ်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သမ္မတ၏အသံမှကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိအသံများစွာထုတ်လွှင့်ခဲ့သည် ဖီဖာ, အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးမစ္စတာ Gianni Infantinome Fatma Samoura သည်အခြားဘောလုံးသမားများနှင့်မီဒီယာများမှတဆင့်။ တစ်ခုခုလုပ်နိုင်အောင်ဒါ။ သည်အခြားပြိုင်ပွဲသည် က CAFကျွန်ုပ်သည်ဖျက်သိမ်းခြင်းမဟုတ်ဘဲရွှေ့ဆိုင်းခြင်းကိုပိုမိုနှစ်သက်ပါသည်။ အာဖရိကကိုယ်စားလှယ်များသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲသို့ ၂၀၁၉ ကမ္ဘာ့ဖလားနောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲအဖြစ်တက်ရောက်ကြမည်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတရားဝင်ပွဲမှာ ၂၀၂၀ မတ်လတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောပွဲဖြစ်သည်။ အာဖရိကအမျိုးသမီးများဘောလုံးသည်ဤအခြေအနေကိုမလိုအပ်ပါ။ အခြားတစ်ဖက်မှကြည့်လျှင်အာဖရိကအမျိုးသမီးများချန်ပီယံလိဂ်ဖန်းတီးခြင်းကိုလက်ခံရန်ဖြစ်သည်။ The က CAF ဒီဆန်းသစ်တီထွင်မှုများအတွက်ဂုဏ်ပြုခံရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ မ်းနည်းမှုကိုလျော့ပါးစေရန်လုံလောက်မည်မဟုတ်ပါ။ ငါဒီပြိုင်ပွဲမှာ Louves Minproff ကိုကံကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပြီးအာဖရိကချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ Douala က Oryx ကိုတုပချင်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကကင်မရွန်းသည်ကမ္ဘာ့ဖလား၏နောက်ကောက်အဆင့်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်နယူးဇီလန်နှင့်သင်၏ရည်မှန်းချက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်ဆဲအကြောင်းပြောနေတာလား ?
ငါကဒီရည်မှန်းချက်နှင့်ကျွန်တော်တို့ကို 8 များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီသော Indomitable ခြင်္သေ့၏ဤစုပေါင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမေ့လျော့ဖို့ကြိုးစားရင်တောင်e နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့မီဒီယာ၊ ဘောလုံးပရိသတ်တွေကငါ့ကိုသတိပေးနေတုန်းပဲ။ အချို့လူများက၎င်းကိုပင်ပန်းတိုင်ဟုပင်ခေါ်ဆိုကြသည်။ အီတလီ 30 ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ Papa François Oman Biyick ရဲ့အာဂျင်တီးနားကိုဆန့်ကျင်တဲ့ရည်မှန်းချက်ရဲ့ ၃၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာဒီရည်မှန်းချက်ကိုကျွန်တော့်ရဲ့လူမှုမီဒီယာစာမျက်နှာတွေမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ။ ငါဘောလုံးကွင်းတွင်ရှိတိုင်းအချိန်တိုင်းဂိုးသွင်းနိုင်သည်။ ထိုထက်ပို။ ပင် Indomitable ခြင်္သေ့အဘို့ဖြစ်၏။ ကျွန်ုပ်၏အသင်းဖော်များ၏အကူအညီဖြင့်နယူးဇီလန်ကိုဆန့်ကျင်ခြင်းကဲ့သို့သောအခြားအရေးပါသောရည်မှန်းချက်များကိုရရှိရန်မျှော်လင့်ပါသည်။ အကယ်၍ ဒီရည်မှန်းချက်ကကင်မရွန်းမှာခေါင်းစဉ်တစ်ခုပြန်ယူလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကအမြင့်ဆုံးပါပဲ။
အချို့သောကင်မရွန်းဘောလုံးသမားများသည်ကလပ်များရွေးချယ်မှုအတွက်ဝေဖန်ခံရသည် တိုင်းတပါးမှယူဆောင်ခဲ့သော " မြင်သာမှုပိုကောင်းသည့်အခြားချန်ပီယံများကိုကျွန်ုပ်တို့မစဉ်းစားသင့်ပေလော။ ?
ငါ Valerenga နှင့်နော်ဝေလိဂ်အတွက်အလွန်ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။ ငါတတိယရာသီကိုနော်ဝေးတွင်စတင်ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်ဒုတိယပြီးဆုံးသည့်ကလပ် Valerenga တွင်ဒုတိယဖြစ်သည်e ချန်ပီယံလိဂ်ပထမ ဦး ဆုံးအရည်အချင်းများဖြင့်ပုဒ်ဖြတ်နောက်ဆုံးချန်ပီယံ၏။ နော်ဝေဖလားဗိုလ်လုပွဲလည်းရှိခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာဒီကလပ်ကိုရောက်ရှိလာကတည်းကကြီးမားတဲ့အရာတွေရရှိခဲ့တယ်။ ဒီရာသီမှာကျွန်တော်တို့ဟာလိဂ်၊ ဖလားတွေထဲမှာပိုကောင်းလိမ့်မယ်၊ ချန်ပီယံလိဂ်မှာအကောင်းဆုံးကစားနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်ဟာအမြဲတမ်းစူးစမ်းလေ့လာပြီးကျွန်တော့်ရဲ့အေးဂျင့်၊ Indomitable Lionesses နှင့်အမြဲတမ်းကောင်းမွန်စွာကစားနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်သည် Valerenga အတွင်းသို့မဟုတ်ဥရောပထိပ်တန်း ၅ ချန်ပီယံ၌ကလပ်တစ်ခုတွင်တိုးတက်လိုသည်။ ထိုအချိန်အတောအတွင်းကျွန်ုပ်သည်ကွင်းကွင်း၌အကောင်းဆုံးသိသမျှကို ဆက်လက်၍ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနေဆဲဖြစ်သည်။ ကြွင်းသောအရာတို့ကိုအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏လက်တော်၌ငါစွန့်ခွာမည်။
Tele RELAY တစ်ခု 30179 ရေးသားချက်များ 1 မှတ်ချက်များ
Zindzi Mandela ကဘယ်သူလဲ
ဂင်းနစ်စူပါလိဂ်: Day2အချိန်ဇယား! - ဘောလုံးစကားပြောကြပါစို့ 237
လက်မောင်းနပန်းသမား Fecafoot - အဖွဲ့ချုပ် - CAS ၏လျင်မြန်သောဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်အံ့အားသင့်သွားသည်။
Gustavo Bou သည် Revolution 90-5 အား Impact အပေါ်အနိုင်ရရန်အတွက် ′2 + 1 ဖြင့်ရမှတ်များယူထားသည်။